"Miomàna hihaona amin’Andriamanitrao." Amosa 4:12
Rentsika matetika io fanontaniana io! Raha ny marina, dia eo am-piomanana mandrakariva isika : hamonjy fotoana, hivory, hiantsena… Miomana koa isika ho an’ny hoavy, ny asa aman-draharaha, ny ankohonana… Nefa tsy haintsika fantarina akory izay havoakan’ny roapolo taona manaraka, ary na izay hoentin’ny ampitso aza dia tsy fantatsika.
Tsy isalasalana kosa, na dia kely aza, fa hisy fotoana iray tsy azo ihodivirana, dia ny hihaonantsika amin’Andriamanitra. Ary tena zava-dehibe ny fahavononana hiatrika io fihaonana io.
Ahoana no hiomanana ho amin’izany? Inona no tokony hatao? Miezaka manao ny tsara ve, miezaka mba ho mendrika havelan’Andriamanitra heloka? Tsia, tsy izany no fomba tsara iomanana ho amin’izany fotoana tsy maintsy hatrehin’ny tsirairay izany, indray andro any. Ny lalana mankany amin’Andriamanitra dia Olona iray, izany hoe Ilay nirahiny avy tany an-danitra sy nilaza hoe: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana” (Jaona 14:6). Raha manatona an’i Jesosy isika, ka miaiky an-kitsimpo fa diso ary mpanota very sy lavitra Azy, dia havelany ny helotsika. Efa nanaiky ho faty Izy, mba hanefa ny tambin’ireo fahotantsika, ary ny fitsanganany tamin’ny maty no manome antoka antsika fa nohamarinina teo anatrehan’Andriamanitra isika.
Ny mpino izay nametraka ny tokiny tamin’ny asa nataon’i Jesosy dia afaka miteny tsy am-pisalasalana hoe: Vonona aho ny hihaona amin’Ilay Andriamanitro, ary mihoatra noho izany aza, miandry sy maniry io fotoana io!
Izany koa ve no fanantenanao?